उपत्यकामा यस अघि घोषित निषेधाज्ञा भोलिदेखि सकिंदै, अब फेरि थपिएला ? | Kendrabindu Nepal Online News
उपत्यकामा यस अघि घोषित निषेधाज्ञा भोलिदेखि सकिंदै, अब फेरि थपिएला ?
गत भदौ ३ गते राति देखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समय भोलि सकिंदैछ । निषेधाज्ञा पुनः यसरी नै थपिन्छ कि हट्छ भनेर सर्वसाधारणमा जिज्ञासा उब्जिरहेको बेला उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल हुने भएको छ ।
जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउन सरकारले उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत हुने बताइएको छ ।
अब थप गर्ने निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने संकेत देखिएको छ । तर यस बारे अहिले नै निधो भने भएको छैन । भदौ तीन गते रातिदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । एक साताका लागि जारी निषेधाज्ञा पुनः थपिएको थियो ।
गत भदौ २ गते बसेको काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को बैठकले भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि भदौ १० गते राति १२ बजेसम्म एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत मंगलबार तीन जिल्लाका सीडीओ, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्यका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले निषेधाज्ञालाई बढाउँदै जानु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार एक साताका लागि निषेधाज्ञा पुनः थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जस अनुसार भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको समय बढाइएको थियो । भदौ १७ गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ ।
Prevजन्मेदेखि १८ वर्षसम्म सुतेको सुत्यै सन्दीप लामिछाने
सूर्यविनायकद्वारा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै टोलटोलमा स्वाब सङ्कलन शुरुNext